Ikhaya / Blog / Ukulungiswa kwakhona kwegumbi lokuhlambela, imivumbo emi-5 yokufumana utshintsho oluhle
2021 / 04 / 10 uhleloBlog 3765 0
Ukuba sithi yeyiphi indawo yekhaya eyona inzima kwaye ibiza kakhulu ukuyilungisa, igumbi lokuhlambela linokubotshwa kunye nekhitshi kuqala. Ufuna ukwenza uluvo lokuba mdala kwigumbi lokuhlambela, kodwa ungafuni ukwenza into enkulu, yeyiphi elula kwaye elula yokwenza? Kolu shicilelo, sisebenza ngokuhonjiswa kwigumbi lokuhlambela, nditsho nangaphandle kweebhafu zokuhlambela, amampunge emarmore kunye nezipili zamandulo ezingento, singazisebenzisa ezi zinto zintlanu zincinci zokuphucula indawo yokuhlambela.
Ngaba usebenzisa ibhokisi yesepha engeyiyo yesepha? Musa ukubekwa ezindleleni zakho. Ezo zitya zitshiphu kwaye zingadibaniyo zinokulahlwa endaweni yazo kuqokelelwe ingqokelela yakho yazo zonke izikhongozeli ezibukeka kakuhle.
Iingqayi zeglasi ezintle zekotoni swabs kunye neebhola zekotoni, kunye nezitya ezincinci zesitya nazo zifanelekile. Eyona nto ibaluleke kakhulu, zipakishe zonke kwitreyi yokugcina kwaye amampunge akho aya kuba acocekileyo. ▼
Sebenzisa udaka oluncinci lwamatye ukugcina iibrashi zokuthambisa okanye iibhola zokuhlamba. ▼
Izitya ezinkulu kunye neepleyiti ezincinci zinokusetyenziswa kakuhle. ▼
Ukuba awufuni kuyenza yonke indlu imanzi, ibhafu yokuhlambela engatyibilikiyo kubalulekile, njengoko ucoceko kunye nokutsha kusisiseko. Ukuba ufuna ukwenza igumbi lokuhlambela libe lihle ngakumbi, unokufuna ukubuyisela indima kumatshini ongatyibilikiyo ngombhoxo omnandi. ▼
Ngaba ukhathazekile kukuba ikhaphethi ihlala imanzi kwaye kulula ukufuya ukungunda kunye nokungcola? Emva koko yenza umsebenzi olungileyo wokwahlula okumanzi kowomileyo, emva koko uhlambe kwaye utshintshe rhoqo! ▼
Izibuko zegumbi lokuhlambela zizinto ezibalulekileyo ezibonisa ukuthungwa. Ukuba isipili sincinci kakhulu, siyakuba nembono yendlu eqeshisayo. Ke ngoko, kufuneka ukhethe isipili esihle sokunxiba kunye nomda.
Nangona isinki ilula kakhulu, kodwa ngesipili sokunxiba esenziwe ngesidiliya saseYurophu, yonke indawo iye yangumbono wobulunga. ▼
Isipili esiluxekileyo nesinesisa sesixande esinesakhelo somthi, umbala weplanga wokuqala wesakhelo kunye nombala omhlophe omsulwa ohambelana ngokugqibeleleyo. ▼
Ukuba awukwazi ukuthenga isipili esifanelekileyo, unokufuna ukwenza i-DIY isakhelo ngentambo yomququ. ▼
Igolide okanye ubhedu bubungangamsha kwaye bunokusetyenziselwa ukuphucula ubungangamsha ngokufanelekileyo. Imvelaphi yokukhanya ngegolide eqaqambileyo ekhanyayo ijongeka intle kwaye isetyhini, ngelixa imvelaphi emnyama enegolide emnyama enzima inesidima kwaye inomoya. Izixhobo zegumbi lokuhlambela kunye nezipili zezona zilungele igolide, imveliso enye efanelekileyo nayo kulula ukuyithenga.
Kwimvelaphi ecocekileyo emhlophe, ukuchukumisa kwegolide eqaqambileyo kutsala umdla kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba isithuba simnyama, izinto zegolide ezikhanyayo ezilula kakhulu ziya kulahleka ngokulula ngasemva. ▼
Xa imvelaphi yendawo imnyama okanye ikhanya kwaye imnyama idityanisiwe, ukukhetha igolide enzima kancinci kuya kujongeka ngathi kuyabhalwa. Kwangelo xesha, iiseti zezinto zegolide ezinamandla angaphezulu, kodwa nakwimvelaphi ukuqaqambisa ukuyilwa kolawulo oluphezulu. ▼
Iintsapho ezininzi zihlala zinganaki ukhetho lwezibane zangasese. Sebenzisa ibha yokuhlambela endaweni yezibane ezingaphezulu, okanye usebenzise ikhabhathi engelutho kunye nomthombo wayo wokukhanya endaweni yezibane zodonga. Ingqondo ephambili yendawo ivela ekuqwalaselweni kweenkcukacha, izibane ezibukeka kakuhle kunye nezibane eziziswe ngumgangatho wezincedisi, ngokuqinisekileyo zifanelekile ukucinga.
Ukukhanya okuphambili + kwezibane ezincinci, imithombo emininzi yokukhanya ukwenza imeko enomtsalane. ▼
Isibane esenziwe ngeplometron esime njenge-chic sihonjisiwe kwaye asinzima kakhulu. ▼
Ukuba igumbi lokuhlambela lakho likhulu ngokwaneleyo, khetha i-chandelier entle, ikhandlela enkulu eneepateni ezinzima, kwaye utshatise iphepha lodonga neentaka neentyatyambo ukwenza kwangoko umbono wento entle. ▼
Zincinci kwaye zibukeka kakuhle izibane zodonga. ▼
Ukuba awufuni ukonakalisa ukulula kweendonga ezine, ungasebenzisa ikhandlela elincinci endaweni yesibane sodonga. ▼
Ukuhlamba kukuphumla, kwaye ukukhanya kakhulu kwenza abantu baphaphame. Ukuba ufuna ukuphumla ngesantya esincinci, khanyisa ikhandlela kwaye wonwabe ngexesha lokuhlambela labucala. ▼
Ngaphambili :: "Ixabiso eliphezulu" legumbi lokuhlambela, liyamangalisa, ngaba kukho uhlobo olulungileyo engqondweni yakho? next: Uyifaka njani indawo yokuhlamba ngakumbi? Qala kwezi nkalo zine, Ukuqinisekisa ukuba ukuJongwa kweNtle nokuSetyenziswa ngokuLungileyo!